Wedding Red - yebo injabulo Sawubona!
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi engu-100 lomshado akunakwenzeka ... Bambalwa abantu abahlala kuze kube manje enjalo, futhi nakhu mayelana umbhangqwana oshadile. Kodwa noma kunjalo, futhi kwenzeka. umbhangqwana ojabulayo of Azerbaijan uye wakwazi bahlala umshado eyikhulu. Kubo futhi wathola ilungelo ukuletha kanjani leli round ngejubili. Banquma ukuthi Wedding Red - yigama efanelekayo. Hhayi-ke,!
Usuku eyikhulu lomshado - lena usuku sina impela, ngakho baligubhe ngendlela enkulu. Futhi, naphezu kweqiniso lokuthi lo mbhangqwana isivele kweminyaka sina futhi ayabiwa ngu imikhosi asebenzayo futhi enomsindo, lomshado ebomvu wavakashela hhayi kuphela izihlobo. Lokhu umgubho wokukhumbula avunyelwe ukuvakashela wonke umuntu ofisa, njengoba ithuba ukubona celebration obunjalo buyindlala kakhulu. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi umshado Red kuthatha ngempela ezinomsindo futhi kumnandi ngaso sonke isikhathi.
Njengoba kuvamile emphakathini, vakashela amaholide ngilambatha kuyinto engathandeki kakhulu, ngakho kufanele enze izinto ngendlela wemfanelo kukhethwa isipho nemigubho. Yokudumisa iholide, ke wanquma ukunika lo mbhangqwana zonke abomvu.
Okokuqala, kungcono izimbali, rose abomvu, okuyinto zifanekisela hhayi kuphela uthando kanye nogqozi, kodwa futhi kunikezelwa nokuthembeka iminyaka eminingi ezayo, okuyizinto ngakho ngempumelelo khombisa owakwakhe ngubani usufinyelele weminyaka, njengoba Wedding Red.
Njengoba izipho owakwakhe, sigubha ikhulu-nyaka layo, kungenzeka ukuba ukhethe ezihlalweni okubomvu, imifanekiso, izithombe kanye nezinye izipho ezokwenza silingane isihloko.
Izingane kumele kube indlela lubucayi kakhudlwana komunye kukhethwa isipho futhi ukufundisa abazali babo imihlobiso zamatshe obomvu, lapho kuyoba uphawu ezihlonishwayo, sibe nokwazisa nokubonga.
Kodwa umshado Red ngokwayo kusikisela ukuthi abagqugquzeli abakwazi ukwakha imikhosi emikhulu, futhi isibalo izivakashi akunakwenzeka ukubikezela. Akuwona wonke kuphela ababukele idolobha eza egijima ukubona umuntu onamandla kangaka umbhangqwana oshadile, kodwa nomphakathi wonkana yezwe, ngisho phesheya ungafisa ukuhlonipha lo mbhangqwana. Kungenxa yaleso sizathu kuyadingeka ukuba kulungiswe ukuze ochwepheshe belungiselela ukugujwa lwethi lomshado nemigubho.
Kodwa kanjani ukuchitha iholide sikhumbuleke futhi ophanayo ku izipho? Kukhona umqondo omkhulu ezingase zithathwe emcimbini ezinjalo. Auction emshadweni - kungcono indlela eyingqayizivele ukubungaza hhayi kuphela izivakashi kodwa futhi wengeza elikhuhluziwe esehlakalweni ezifana ekugubheni lomshado nemigubho.
Ukuze siqhube le endalini kudingeka ukuhola, oyothi balungile izinto kanye izihlalo eziningi, lapho ungafaka lenqwaba izivakashi.
Yini lokukhetha njengoba eziningi? Lona umbuzo elula. Laba bahlala ndawonye iminyaka eyikhulu, akungabazeki, iye efunde esitolo enkulu impahla ezivamile, okuyinto okunzima ukubeka zonke amakhabethe ekhaya, kodwa lezi zinto zibaluleke kangaka kuzo zonke isivakashi yomshado Red. Thola into kusukela babuye baxoxa nombhangqwana owakhonza wakwazi ukugcina imizwa yakhe isikhathi eside enjalo, cishe wonke umuntu ufuna emhlabathini, futhi kungakhathaliseki ukuthi kungakanani lubekelwe.
Ethandwa kakhulu bayojabulela ingubo yomshado, uma uyakwazi ukugcina eyikhulu. Zingabekwa ukudayiswa cufflinks noma boutonniere, owokuqala indwangu noma ithebula isethi, okuyinto yethulwa emshadweni wabo egolide. Amathenda ingaqoqa izinkulungwane, imali ngokufana ncamashí kakhulu futhi uthole yi esikalini celebration elikhanyayo a weminyaka engu ezingavamile ezifana. Le mali kungenziwa esichithwa esiza abantulayo, elibuye ngeke ubuphakamisa umbhangqwana ojabulayo.
Izivakashi nazo uthola isipho esikhethekile kusukela "nabantu abevile ekhulwini leminyaka eshade", okuyisipho esiyigugu ngaphezulu lokhu kungathathwa ayitholakalanga. Lesi isibonelo yangempela yokuphila, ngobuqotho futhi ujabule, okungaba ekhumbulekayo ukuya nomuntu oyedwa emhlabeni, nibone incazelo ukuphila emehlweni sakhe sothando. Thandanani bese uyeke Wedding Red knock isidleke nomndeni wakho!
Wedding ngombala burgundy: imibono ubuciko, isithombe
Wedding e Boho isitayela. ingubo yomshado Original e isitayela Boho umakoti
Ikhekhe lomshado - original noma zakudala
Amakhodi kwi "Assassin Creed 4: Black Flag": Ingabe zikhona?
Indlela yokutshala okufana nemihlobiso emise okwamaselwa?
Indlela ukukhubaza "I-Opera Mini" ukuze "Tele2": igxathu negxathu Umhlahlandlela
Nikolay Naumov - Biography, Filmography, ekuphileni "umfana wangempela"
Izithunzi Green ngoba amehlo aluhlaza. khetha tint